Tababare Solskjær oo ammaanay labo ka mid ah xiddigha Man United kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Granada – Gool FM
Tababare Solskjær oo ammaanay labo ka mid ah xiddigha Man United kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Granada
Dajiye April 9, 2021
(Yurub) 09 Abriil 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaanay labo ka mid ah xiddigha Red Devils, kaddib bandhigii ay ka sameeyeen inta lagu jiray kulankii xalay ay guusha ka gaareen naadiga Granada.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaan kala dul dhacay labada xiddig ugu muhiimsan kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes iyo Marcus Rashford, kaddib ciyaartii xalay ee Granada.
Manchester United ayaa guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Granada garoonka Estadio Nuevo Los Carmenes oo ay ku booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada lugta hore wareega siddeeda ee tartanka UEFA Europa League.
Shabakada “BBC Sport” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay Ole Gunnar Solskjær kaddib ciyaarta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma aheyn habeen fiican, sababtoo ah waxaan qaadanay saddex kaarka jaalaha iyo saddex ganaax.”
“Inaan ku guuleysano 0-2 waa natiijo fiican, waan ogeyn sida ay u adag tahay in lagu ciyaaro Spain, iyo inaan si fiican u ciyaarno si aan u helno natiijo fiican.”
Intaas kaddib Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaan kala dul dhacay labada xiddig Bruno Fernandes iyo Marcus Rashford, wuxuuna yiri:
“Marcus Rashford iyo Bruno Fernandes waxay ahaayeen kuwa gaar ah, taasna muhiimad weyn ayey noo leedahay.”
“Marka laga hadlayo goolka koowaad, wuxuu ahaa bilow fiican oo ka yimid Rashford, wuxuuna kubadda ku helay qaab layaab leh, goolka labaadna, Bruno wuxuu aad ugu kalsoon yahay tuurista rigoorada, xitaa haddii uu goolhaayaha ku dhawaado inuu badbaadiyo.”
Muxuu Mikel Arteta ka yiri bar-bardhicii ay Arsenal la gashay kooxda Slavia Prague?